Izindaba - Ukubuyekezwa okuhlelekile kwama-drapes okuhlinza kanye nemijiva yokuhlinzwa
Ukubuyekezwa Okuhlelekile Kwezingubo Zokuhlinzwa Nezingubo Zokuhlinzwa
Sebenzisa amathawula emigodi okuhlinza oyinyumba ngesikhathi sokuhlinzwa ukuvimbela ukuxhumana netafula lokusebenza nokugcina inzalo yendawo yezemvelo, imishini, kanye nemvelo ezungeze isiguli. Ngokufanayo, ngesikhathi sokuhlinzwa, imijiva yokuhlinza oyinyumba nayo kufanele igqokwe eqenjini lodokotela ukuze kugcinwe inzalo yendawo yokuhlinza futhi yehlise ubungozi bamagciwane asabalala ezigulini nakubasebenzi.
Izingubo zokuhlinza namathawula emigodi okuhlinzwa kwenziwa ngezinto zokusetshenziswa eziningi noma ezikodwa. Kule mikhakha emibili, ukwakheka nokusebenza kwezinga lesigaba ngasinye kwehluke kakhulu, okukhombisa ukuhweba okudingekayo kwezomnotho, ukunethezeka, kanye nezinga lokuvikelwa elidingekayo emisebenzini ekhethekile.
Ngesikhathi sokuhlinzwa, uma impahla ye-drape iba manzi, ingozi yokudluliselwa kwe-pathogen iyanda. Ngakho-ke, amathawula emigodi okuhlinzekwa ngezinhloso eziningi noma okukodwa kanye nezinto zokugqoka zokugqoka ezisetshenziswa ekusebenzeni kokuhlinzwa kufanele zikwazi ukuvimbela ukungena kuketshezi. Izinto ezisebenzisekayo ngokuvamile ziqukethe izindwangu ezahlukahlukene ezilukiwe kanye / noma ukotini othungiwe, noma ezinye izindwangu ezingaxutshwa ne-polyester kanye / noma ukwelashwa kwamakhemikhali. Le mikhiqizo kumele iqine. Amathawula wokulahla alahlwayo alahlwayo kanye nemijiva yokuhlinza kuvame ukwenziwa ngezindwangu ezingezona ezelukiwe ezenziwe ngezinto zokwenziwa kanye / noma ngezinto zemvelo, futhi kungenzeka ukuthi zelashwe ngamakhemikhali.
Ngemuva kokuphothulwa kokulungiswa kwendawo okuhlinzwa kuyo, sebenzisa ithawula lezimbobo lokuhlinza elingelukiwe, ithawula elejwayelekile lomgodi noma ithawula lomgodi elifakwe umuthi wokulwa namagciwane (ikakhulukazi iodophor) esikhunjeni sesiguli. Le filimu inamathiselwe esikhunjeni, udokotela ohlinzayo usika isikhumba bese esimboza. Ngokwethiyori, kubhekwa njengesithiyo semishini kanye / noma i-microbial ukuvimbela amagciwane ukuthi angahambi esikhumbeni aye endaweni yokuhlinzwa.
"Izinkombandlela ze-SHEA / IDSA" ezakhishwa ngo-2014 zancoma ukuthi ama-drapes ahlanganisiwe angenawo ama-antibacterial bacteria akufanele asetshenziswe njengecebo lokuvikela i-SSI 8. Ngasikhathi sinye, iBritish National Health Association I-Institute of Health Care (NICE) yakhipha umhlahlandlela ngo-2008, eyayincoma ukuthi uma kudingeka indwangu yethawula eyimbumbulu, kumele kusetshenziswe indwangu ekhulelisiwe.